Wax ka baro Laacibiinta Tababerayaasha isku bedelay iyagoo aan ka fariisan kubadda cagta Rooney, Giggs iyo magacyo kale. – hareerley News
Waxa aynu warbixintaan kaga hadli doonnaa xiddigaha fara ku tiriska ah ee kubadda cagta caalamka soo maray ee isku helay darajada, iyagoo xiddigo ah isla kooxdaasna ka noqday macallimiin.
Tusaale xiddig isagoo aan ka fariisan kubadda cagta kooxda uu ka tirsan yahay u noqday xiddig iyo tababare marka uu doono ayuu garoonka soo gali karaa oo ciyaari karaaa marka uu doonana waa macalin oo maskada ayuu ka ciyaari karaa.
Waxaa Warbixintaan kasoo dhex muuqan doona magacyo waa weyn, waxaana warbixintaan idiin soo jeedinaya Wariyaheenna Sagal Daahir Qaasim.
Puntland oo sheegtay in uu isku soo dhiibay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Somaliland…